‘फर्निवर्ल्ड नेपालको एक नम्बर फर्निचर ब्राण्ड हो’ « Artha Path
लोकराज पाण्डेय, सीईओ, फर्निवल्र्ड प्रा.लि, केन्द्रिय कार्यालय–नयाँ वानेश्वर ।
फर्निवल्र्डले ग्राहक समक्ष ल्याएका प्रोडक्ट, सेवा–सुविधाको बारेमा बताइदिनुहोस् न ?
हामीले फर्निवर्ल्डलाई सुरु गर्दा पूर्ण रुपमा सोरुमबाट सामानहरु बेच्ने भनेर गएका थियौ । एकदमै गुणस्तर र बिक्री पछिको सेवा (आफटर सेल्स) दुइ ओटालाई ध्यान दिए सामान बजारमा ल्याएका थियौं । राम्रो सामान दिने र कसैको घरमा कुनै समस्या पर्यो भने तुरुन्तै विक्रिपछीको सेवा दिने गर्न थाल्यौ । दुइ चीजलाई फोकस गरेर अघि बढेका थियौं । यसो गर्दै जाँदा मान्छेहरुसँग कनेक्टिीभि बढ्दै गयो र ग्राहकको अत्यन्तै विश्वास बढेर गयो । मान्छेलाई घरमै डेकोरेशन गर्नुपर्ने, डिजाइन गर्नुपर्ने, साना साना समस्याहरु जस्तो लाइटहरुको समस्या पर्ने खालका समस्याहरु भेट्यौ । जसले हामीलाई ठुलो स्कोप आन्तरिक सजावट(इन्टेरियर)को देखायो । विगत ५ बर्ष यतादेखि इन्टेरियर डिजाइनिङको अलग बिभाग बनाएर काम गरिरहेका छौं ।
अहिले हामी दुइ लाइनमा काम गरिरहेका छौ । एउटा इन्टेरियर सर्भिस दिने । त्यो भनेको प्रोजेक्ट बेशिस काम हो । जस्तो एउटा कलेजको वा हस्पिटलको कुनै प्रोजेक्ट लिने । त्यसमा हामी लाइट, एसि, टायल, मार्बल, गे्रनहाइट, युपिभिसी, झ्याल ढोका, किचेन, रेष्टरुमको टाइलहरु, रेलिङहरु सबै गछौ । हाम्रो सर्भिस अहिले प्रोजेक्ट वरियन्टेडमा गयो । तपाइलाइ रेडि टु मुभ दिने । हाम्रो डिजाइन टीमले डिजाइन गर्ने । टेक्निकल टीमले काम गर्ने अनि पुरै हयान्डवभर गर्ने । बिक्री पछि समस्या आएका आफटर सेल्स टिमले सेवा दिने । चालु बर्ष हामीले १२८ भन्दा बढी एसी बेच्यौ, बिजुली पसल नभएपनि हामीले २ करोड भोलुममा बिजुली बेचेका छौ । त्यो विजुुली सामान बेचेको होइन् बिजली पसल हाम्रो होइन । प्रोजेक्ट वर्क हाम्रो हो । प्रोजेक्ट गर्दा त्यो गर्छौ । त्यसैले हामीले इन्टेरियर डिजाइनरमा सबै चिज डिजाइनीङ टु हयाडओभर गछौ । अर्को भनेको हजुरलाइ प्रोडक्ट मात्रै चाहियो । प्रोडक्ट सेल गर्नलाइ स्वरुम भयो । वाकिङ कस्टुमर जो पनि आउनुहुन्छ उहाँहरुलाई सामानहरु हाम्रो आउटलेट ३ (नया बानेश्वर, मध्य बानेश्वर र सामाखुसी) ठाँउमा छ त्यहाँबाट हामी सर्भिस दिन्छौ ।
फर्निवल्र्ड अरु यस्तै संस्था भन्दा के कुरामा फरक छ ?
बजारमा सामान बेचेपछि मतलब नै नगर्ने ट्रेङ छ । सामान बेच्यो, नाफा भइसक्यो सिद्धियो । तर हामीले के गरेका छौ भने तपाइले सामान लानुभयो । ३ दिनपछि तपाइलाइ फोन सम्पर्क गर्छौ । हामीले त्यहाँ डेलिभरी गर्दा, राख्दा कुनै टुटफुट वा ड्यामेज पो भयो कि ? ठुला समान हुन्छन् हयान्डेलिङमा समस्या छ । गाडीमा लान पर्नेहुन्छ, घरको सिँढी सानो हुन्छ । त्यही पनि लाँदालाँदै पनि विग्रिएको हुनसक्छ । हामी विक्रिपछीको सेवामा एकदमै मजबुत छौ । प्लस माइनस ३ डे भन्छौ । ३ दिनभित्र विक्रिपछीको सेवा दिन्छौ । कहिले–काँही हाम्रोमा कुनै समस्या छ भने फ्रिमा गर्छौ । ग्राहकलाई कुनै सेवा थप्नुछ भने न्युनतम शुल्कमा गर्छौ । यसरी क्वालिटी गुणस्तर, समयमा सामान ढुवानी र बिक्री पछि आवस्यक सेवा नै हो अरु भन्दा हामी पृथक हुने आधार ।
नेपालको यो उद्योग काठमा आधारीत छ । विदेशमा जस्तो कम्प्रेसड काठहरु छैनन् । विदेशमा काठमा विकल्पहरु धेरै छन् । तर नेपालमा त्यस्तो छैन । कच्चा पर्दाथ नै पहिलो समस्या हो । अर्को हाम्रो प्रतिस्पर्धा विदेशी सामानसँग हुन्छ । हाम्रो त्यत्रो क्षमता छैन किन त्यो लेभलमा काम गर्ने । चाइनाको कुरा गर्दा उसको सयौं देशसँग बिजनेसको इतिहास छ । नेपालले आफनै देशमा गर्नको लागि त नेपालको त्यो मार्केट, त्यो मेशिन ल्याएर स्थापित गर्न त भ्याउँदैन नेपालले । त्यो कारणले नेपालले विदेशी प्रोडक्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको हो । नेपाली जनशक्ती, नेपाली कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर गुणस्तर दिन सके सम्भावना नभएको होइन ।
फर्निचर मात्रै भन्दा नेपालमा ८–९ सय करोडको आयात हुन थालेको छ । त्यो भन्दा ठुलो भोल्युम चाँही प्रोजेक्टहरु जस्तो कुनै ठुलो हस्पिटल खुल्यो भने उनीहरुले प्रत्यक्ष आयात गरिरहेका छन् । त्यो आयातको डाटा त भन्न सकिदैन । तर मलाई लाग्छ दुबै गरेर २ सय करोड भन्दा ज्यादाको आयात छ । निर्यात यो उद्योगबाट छँदैछैन भन्दा हुन्छ ।
प्रस्तुती: सगिता सुवेदी
गभर्नरलाई एफएनसीसीआईकाे स्मरण ‘ब्याज बढ्दैमा निक्षेप बढ्दैन’
आर्थिक स्थायित्वका लागि महासंघको पहल, विद्यमान विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव एवं समाधानको उपाय